दल, दलाली र देश ! | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / दल, दलाली र देश !
दल, दलाली र देश !
Posted by: युगबोध in विचार September 12, 2018	0 162 Views
उत्तरी छिमे की मित्रराष्ट्र चीनले ने पालको पारवहन सुविधाका लागि सबै बन्दरगाह प्रयो ग गर्न दिने सहमति जनाएछ । खुशीकै विषय हो यो  । अनि भारतले पनि रक्सौ लबाट काठमाडांै सम्म रे ल पु¥याइदिने भएकै छ । कम खुशीको विषय है न यो पनि । काठमाडांै मा रे ल चीन सरकारले पनि पु¥याइदिने चर्चा चल्न छाडे को छै न । भारत र चीनका रे लको प्रतिस् पर्धात्मक रे ला, जहिले हो ला हो ला । तर ने पालीले नबुझे को कुराचाहि“ के रह्यो भने त्यत्रो सुविधा दिन तयार, त्यति ठूला मनकारी र दयालु दे शले दुईवटा साना सहुलियत दिन किन नसके का हो लान् ?
भो लिका कुरा भो लि नै गरे र तातो पानी नाका मात्रै खो ली दिन चीन आजै तयार भएदे खि ने पालका तत्कालका सानातिना समस् या त समाधान हुन्थे  । सबै दिन तयार भएको भारतले चाहि“ अभिन्न मित्रदे श भन्ने , राम–सीताका पालादे खिको सम्बन्ध हो , गौ तम बुद्धका पालामा अझ फराकिलो भयो भने र पौ राणिक कहानी पनि कहने , तर ने पालका बै ंक तथा ने पालीका घरमा रहे का हजार र पँचसयका नो ट चाहि नसाटिदिने † के चाला हो यो ? अहिले दुःख दिएर नातिका पालामा रे ल पु¥याइदिन्छौ ं, अनि सुख भो गौ ला भन्दा हामीले चाहिहो , हो हजुर भन्दै ताली पड्काएर जयजयकार गर्नुपनेर् ? वाह रे ने पालीपन र मन † जलस्रो तमा संसारको दो स्रो धनी भनिएको यो दे शले संसारकै महंगो मूल्यमा त्यही भारत स“ग बिजुली किने र बत्ती बाल्नु परे को छ । २४ घण्टामा १२ घण्टा विद्युत आपूर्ति हुन नसके पनि लो डसे डिङ्गमुक्त भने र घो षणा गरिएको छ । अलिकति सप्लाई बढी भए विद्युत भार थाम्न नसके र पो लै पिच्छे का ट्रान्सफर्मर पड्के र बिजो ग छ । अलि ते ज हावा चल्दा, आधी र हुरी आउदा, पानी पर्दा बिजुली बाल्न नपाइनु सामान्य मानिन्छ । अनि यस् तो दे शले बंगलादे शलाई वार्षिक रुपमा नौ हजार मे गावाट विजुली बे च्ने सहमति गनेर् † नियमितरुपमा डे ढ हजार मे गावाट विद्युत उत्पादन गर्न नसके र आफै लाई चाहिने बिजुली भारतबाट खरीद गरे को दे शले वार्षिक नौ हजार मे गावाट बिजुली बे च्ने भन्दा पत्याउने पनि उस् तै † अजब ने पालको गजब व्यवहार र कारो वार भने को यही हो ला !
साढे दुईदशक अगाडि महाकाली सन्धिलाई संसदबाट अनुमो दन गराउ“दा पनि यो दे शले वार्षिक रुपमा एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी गर्ने गफ बा“ड्दा पत्याइएकै थियो  । जे भयो , भएको छ, सो जगजाहे रै छ । पश्चिमबाट सूर्य उदाएकै छ । अब पनि नपत्याउनुपनेर् कारणचाहि“ छै न । पत्याउ“ र मनको लड्डू घ्यूसित खाउ“ मज्जै ले  । तीजको बे ला पनि हो नि यो † जनतास“ग कर उठाएर कार चढ्न र दर खान कत्ति डर नमान्ने सरकार भएको मुलुकमा अविश्वास नै विश्वासमा परिणत भइसके को छ । भ्रष्टाचार र दुष्टाचार नै शिष्टाचार बनिसके को छ । जे गरे नि जसो भने नि हुन्छ । पत्याइन्छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले गर्न नसके , अरुले त झन् ऑटै गदैर् नन् नि † हुन्छ, हुन्छ, अवश्य पूरा हुन्छ । एक हजार किलो मिटरको से रो फे रो मा रहे का कलकत्ता र विशाखापटनम्को विकल्प सिगात्से बाट चारहजार किलो मिटरको दूरीमा रहे का बन्दरगाहलाई सहज बनाएर । अन्तरीक्षमा अधिकार जमाउने जमानामा त्यति टाढा भन्न नमिले पनि हाम्रो जस् तो सरकार, संस् कार, कार्यशै लीले त्यहा“सम्म पुगे र से वा लिन र दिन कति वर्ष लाग्ला, कुर्नु पर्ला भन्ने विषय विज्ञ पाठकहरुले आफै अनुमान गर्नसक्नु हुन्छ, हनुमानहरुले जे सो चे पनि ।
यस् तै पत्याइने कुरा धे रै भएकै ले ट्वीटरमा पनि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी आए– भारतको रे ल चो भारसम्म आउने र चीनको टो खासम्म † भने पछि चो भारदे खि टो खासम्म हामी आफै ले बनाउनु पनेर् भो † समस् या ††’ मधुरमण आचार्यले टाउकामै ट्वाक्क हाने र टुटुल्को उठाउने खालको टिप्पणी गरे छन् । बुझ्ने का लागि काफी छ ।
अहिले को हाम्रो समस् या रे लको र पानी जहाजको हु“दै है न । पुरानै तरीकाले तातो पानी नाकाबाट सामान आयात–निर्यात गर्न पाइयो स् । त्यत्ति मात्रै गरिदिए पनि ठूलो गुन गरे को हुन्छ, पुग्छ, मानिन्छ, ठानिन्छ । अनि भारतले ने पालीकहा“ रहे का रुपै या“ साटिदिएर, सबै सिमानामा अनावश्यक दुःख मात्र नदिए पनि ने पालीको मन फे रिन्छ । यति साना र सम्भव कामचाहि“ पटक्कै नगरिदिने , रो क्ने अनि ठूला आश्वासन दिएर सलामी लिने ? हु‘“दै भएन यो त । मरे पछि स् वर्गजाने सपना दे खाएर जीवितहरुका जीवनलाई नरक बनाइदिने हरु र हाम्रा दुबै छिमे की मित्रराष्ट्रमा के अन्तर रह्यो भने र कसै ले सो धे मा के जवाफ दिने हो ला ह“ ? भारतले धे रै बो ले र बिगार्छ र चीनले बो ल्दै नबो ले र, चुप लागे रै लतार्छ भन्ने कुरा बिसेर् जस् तो छ । ने पालका विकास निर्माणका परियो जनामा पहिले भारतले हकारे र कब्जा जमाएर काम नगरी जाम बनाएर राख्थ्यो , छकाउ“थ्यो र थकाउ“थ्यो  । अहिले चीन पनि थपिएर त्यही गदैर् छ फकाई फकाई । ने पालका ठूला लगानीका र दीर्घकालीन महत्वका परियो जनाहरु भारतबाट खो से र चीनका हातमा सुम्पने र चीनबाट ताने र भारतका पाउमा दक्षिणा चढाउने हरुले दुबै उस् तै हुन् भन्ने कुरा कहिले बुझ्लान् ?
दशै ं आउन थाल्यो  । प्रदे शिएका ने पालीहरु घर फर्कदा भारतीय सिमानामा जति लुटिन्छन्, ठगिन्छन्, त्यो दे ख्दा मन रुन्छ धे रै को  । हाम्रा सरकारका मन्त्रीहरु नै , सादा पो शाकमा गएर, नचिनिने भएर, झिटी–गुन्टा लिएर आउन् र हे रुन् । सहन सकिने सीमाभित्रका हु‘“दै नन् भारतीय ज्यादती । गुण्डा र पके टमारको कुरा है न यो  । भारतीय कष्टम र पुलिसले पारितिर ने पाली लाहुरे माथि गरे का दुव्र्यबहार र अत्याचार वारिका ने पाली पुलिसले टुलुटुलु हे रे र बस् न बाध्य छन् । कति खिन्न हु“दो हो तिनीहरुको मन ? ने पालमै उत्पादित अदुवा, अलै ची, अम्लिसो र चिया निकासी रो के र सताउने भारतले आफ्ना दे शका कुहे का आलु, प्याज, चामल, तरकारी, फलफूल र रो गलागे का रा“गा, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भै ंसी, गो रु ने पालतिर पठाउने गरे कै छ । जनसंख्या धे रै भएका मुलुक परे छिमे की दुबै  । उनीहरुका कंगाल जति ने पाल छिर्दा वित्तिकै बंगला खडा गरे र बस् छन्, लो टा बो के र पसे काहरु टो यो टा चढे र फर्कन्छन् । ने पाल र ने पालीलाई दुःख दिन्छन् । विकास निर्माणका कामका ठे क्काजति तिनै ले लिन्छन्, कामचाहि‘ कहिल्यै पनि समयमा पूरा गर्दै नन् । आफ्ना गुलामलाई सत्तामा पु¥याएर यहँ“का नदी नाला र खानीहरु सबै हत्याएका छन् । आफूले गदैर् नन्, अरुलाई पनि गर्न दिदै नन् । दुई ठूला रुखका ओ से पमा हुकेर् को सानो विरुवा वा बाघ र ब्वँ“साका बीचमा बसे को बाख्रो को जस् तो हालतमा छ ने पाल ।
रसुवागढीतिरको बाटो पानी परे र, पहिरो गएर र साघुरो भएर रो किएको छ । को रला नाका सुचारु छै न । तातो पानीको ठे गान छै न । चिनिया सामान रो किएकै छन् । जति बन्दरगाह प्रयो ग गर्न पाइने भए पनि ल्याउनका लागि उही को लकातातिरै ताक्नुपनेर् हो भने के फरक पर्छ र ? पहिले भएकै र बिग्रे कालाई बनाएर अरु खो ज्दा पो पत्याउने काम हो ला नि † तर है न, हामीलाई सपनामै रमाउने बानी परे को छ, विपनामा विपत्ति सहे र । हाम्रो बानीबाट परिचित छन् दुबै छिमे कीहरु । पालै पालो काखा र पाखा पार्छन्, मुसार्छन् । अनि आफ्ना विषालु नंग्रा घुसार्छन्, हाम्रा आ“तै सम्म, थातै सम्म । त्यसै ले क्षत–विक्षत छन् हाम्रा सबै संरचनाहरु । उत्तरले धो का दिए दक्षिण धाएर गुहार माग्ने , दक्षिणले सताए उत्तर गएर विन्ती बिसाउने हरुकै बाहुल्यता छ । आफै गर्नुपर्छ, गरिन्छ, सकिन्छ भन्ने हरु छै नन् । उत्तर र दक्षिणबाट आश मारे काहरुले पश्चिमको दलाली गरे का छन् । पश्चिमले पनि दक्षिणकै बाटो भएर, यता आएर हाम्रो हुर्मत लिएका छन् छन् । बाहिर भन्दा हामीलाई सहयो ग गर्न आएको भन्छन्, धन्दाचाहधर्म परिवर्तन गराउने दे खि बालबालिका, महिला, दलित, पिछडिएका र उत्पीडित जाति जनजातिको सवलीकरण र सशक्तिकरणका नाममा द्वन्द्वका खे ती चलाउछन् । हामीलाई तिनै को खातिरदारी गर्दागदैर् फुर्सद छै न । आफै बन्न भन्दा अकैर् को दलालीमा दिन बिताउने राजनीतिक दल भएको दे श कहिल्यै सप्रन्न ।
Previous: कथा जस्तै लाग्ने यथार्थ
Next: तीजको शुभकामना